ख्रुश्चेव मरम्मत: कार्यक्रम
पुनर्निर्माण प्रक्रिया, जीवित क्यापिटल नवीकरण सुरु बासिन्दा को उपस्थिति र सान्त्वना सुधार। हामी मात्र पर्खालहरु र छत विचार भने ख्रुश्चेव, सायद सबै छैन, र नै हदसम्म, आफ्नै outlived। ताप, बिजुली, पानी र ग्याँस आपूर्ति, मल - तर, यो लगभग पूर्ण सबै संचार उपकरण बेकारी छ। यहाँ मात्र गर्भधारण नवीकरण क्यापिटल को अधिकारीहरु मद्दत गर्न सक्छ।
ख्रुश्चेव मर्मत गर्न, उदाहरणका लागि, कलिनिन्ग्राद बनेको सक्छ, र हामी जस्तै सुन्दर हुनेछ, तर संचार त्यहाँ शायद पूर्ण परिवर्तन थिए, र यो बिना मर्मत को कुनै पनि बिन्दुमा छ। नयाँ प्रविधिहरू मा आवास निर्माण देश धेरै सस्ता खर्च हुनेछ। साथै, मान्छे बढि विशाल र आधुनिक अपार्टमेन्ट मा बस्नेछन्, निवास पनि क्षेत्र परिवर्तन गर्दैन।
नवीकरण के हो
ख्रुश्चेव, सबै भन्दा भाग को लागि मानव जीवनको लागि unfitness को कगार मा हो र दुर्घटनामा हुनेछ जब क्षण लागि प्रतीक्षा गर्न आवश्यक छैन। नागरिक ईन्जिनियरिङ् मरम्मत मात्र पुरानो सम्पत्ति पूर्णतया प्रतिस्थापित समावेश छ। यो सबै माथि, एउटा नवीन प्रक्रिया, को reconstructed वस्तु नै कार्यक्षमता परिवर्तन जो निश्चित राजधानी को स्कोप, सामना छ।
ECE समिति अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, सेमिनार, symposia आवास र शहरी विकास गर्न समर्पित एक श्रृंखला आयोजित। तिनीहरूले ऐतिहासिक र वास्तुकला स्मारक, परम्परागत terraced घरहरू बस घरहरू छैनन् भने पनि अवस्थित भवन अधिकतम संरक्षण, - फलस्वरूप, युरोप राय मा कि सामान्य प्रवृत्ति उभिएका थिए। तिनीहरू अझै पनि शहर वातावरण को एकदम महत्त्वपूर्ण तत्व हो। जर्मनी मा, यसरी सम्पूर्ण क्षेत्रमा क्रान्तिकारी। तर, अहँ, मास्को र सेन्ट पीटर्सबर्ग, अब नवीकरण संग धम्की छ जो जस्तै भवन संरक्षित गरिएको छ। ख्रुश्चेव - बन्द, सस्तो र असहज - ज्यादातर को सोभियत संघ निर्माण।
मई 2017 मा मास्को शहर Duma मास्को मा आवास स्टक को नवीकरण को कार्यान्वयन चासोको विषय हुनेछ जुन व्यक्तिहरूलाई र कानुनी निकायहरूको सम्पत्ति र आवास अधिकार, थप ग्यारेन्टी प्रतिज्ञा एक व्यवस्था बित्यो। जब एउटै संघीय व्यवस्था, राजधानी मा ख्रुश्चेव को नवीकरण सुरु हुनेछ, 2017 एक खोल्दै पुरानो घरहरू व्यापक सम्भाव्य प्रकोप रूपमा सम्पूर्ण क्षेत्रमा विनाश हुनेछ र जीवन आवास को लागि लगभग अयोग्य हुनेछ। राजधानी गरेको बासिन्दा धेरै यो परिस्थितिमा खुसी छन्। केही डर आफ्नो सरकार भरोसा छैन र गर्छन्।
यद्यपि, यो ख्रुश्चेव को सम्बन्धित कार्यक्रम नवीकरण बाहिर काम थियो। बासिन्दा पनि कदम तिनीहरूलाई मदत हुनेछ, नयाँ आवास को खरीद मा आफ्नो बचत खर्च छैन। dilapidated पाँच-मंजिल्ला भवन को तोडफोड र आधुनिक सहज घरमा आफ्नो बासिन्दा को स्थानांतरण - मास्को मा ख्रुश्चेव को नवीकरण के समावेश छ भनेर। Muscovites सबैभन्दा उन्नत प्रविधिहरू मा निर्मित ब्रान्ड नयाँ घरहरू बस्ने को क्षेत्र मा एक घर को जीवित क्षेत्र को एक मुक्त बराबर प्राप्त गर्नेछ। यो, यो उद्देश्य लागि निर्मित हुन मानिन्छ छ डाली-मा-ईटा भवन।
ख्रुश्चेव लामो समय को लागि मास्को सरकार मा देखा पर्नुभएका नवीकरण लागि योजना, किनभने भवन, र यति तिनीहरू भन्छन्, वास्तु excesses, र dilapidated, र राजधानी बिना - देश को अनुहार, अर्थात् उनको सडकमा रूस सम्पूर्ण न्याय। शहर को उपस्थिति पाँच-कहानी, धेरै, धेरै धेरै खराब को नै प्रकार।
ख्रुश्चेव आधा भन्दा हुनत त्यहाँ राजधानी, three-, four- र पाँच तले भवन दुई हो धेरै पुरानो जसको प्राविधिक विशेषताहरु ख्रुश्चेव गरेको प्रकारको भवन समान हो, छ, 1957 देखि एक सताब्दी अघि निर्माण। लगभग यी भवनहरु सबै पचास गर्न बीस-पाँच को सेवा जीवनको लागि डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ। आगामी वर्ष मा हालैको समय समाप्त कारण। खैर, ख्रुश्चेव परियोजनाको नवीकरण लामो समय को लागि एक वास्तविकता बन्ने छ - 1988 देखि, र एक सय र साठी हजार परिवार पहिले नै अन्य अपार्टमेन्ट बस्ने। यी भवनहरु को सञ्चालन समाप्त किनभने बस प्रक्रिया हाल त्वरित छ।
श्रृंखला दूर, र रक-स्थिर
तथापि, मास्को, एक धेरै अधिक औद्योगिक आवास को पहिलो अवधि निर्माण गरिएका छन् जो पाँच-मंजिल्ला घरहरू, हुनेछ। पहिले, तिनीहरूले रक-श्रृंखला उल्लेख थिए, तर, यो तिनीहरूलाई बस्ने, पनि, चाँडै असम्भव एक प्राविधिक सर्वेक्षण पछि हुनेछ भनी स्पष्ट भए, यी भवनहरु को राज्य पहिले नै खराब छ, र यो आधुनिक सुविधा र सुरक्षा आवश्यकताहरु को कुनै पनि पूरा गर्दैन।
आवास राजधानी फंड तत्काल ध्यान र अद्यावधिक आवश्यक छ, वा सबै पाँच तले भवन आपतकालीन हुनेछ। त्यो किन हो, र ख्रुश्चेव एक गति नवीकरण मा उत्प्रेरित गर्छ। ठेगाना निकट भविष्यमा घरहरू को तोडफोड अन्तर्गत पर्न मास्को शहर प्रशासन र नगरपालिका साइटहरु को वेबसाइट मा पाउन सकिन्छ।
मेयर कार्यालय योजना को विरोध आन्दोलन को promulgation को फलस्वरूप तोडफोड लागि छुट्याएको घरहरू वसोवास देखियो। र "को लागि" र "विरुद्ध" Rallies बीस हजार मान्छे सम्म सङ्कलन। मास्को केही अधिकारीहरु, जाहिर छ, पर्याप्त नवीकरण को प्रगति को जानकारी छैन, त्यसैले विरोधाभासी बयान गर्छन्। रोल Snowball र मास्को कसरी ख्रुश्चेव को नवीकरण हुनेछ बारेमा अफवाहहरु को सबै किसिमका बढ्न। सेन्ट पीटर्सबर्ग, उदाहरणका लागि, लामो चुपचाप dilapidated आवास अद्यावधिक भएको छ, र यो आदर कुनै हल्ला थियो। त्यहाँ पनि गर्व को नाम भालु सबैभन्दा सफल विकासकर्ताहरूले को एक हो "सेन्ट पीटर्सबर्ग मरम्मत।" सेन्ट पीटर्सबर्ग, जाहिर छ, व्यर्थमा सांस्कृतिक राजधानी मानिन्छ छैन।
तर मास्को मा कार्यक्रम को मुख्य थियोसिस चुनौती प्रयास गर्दै - ख्रुश्चेव साँच्चै अर्थमा मर्मत बनाउन गर्दैन। तिनीहरूलाई बस्न धेरै असहज, मानसिक तिनीहरूले पुराना छन्, र राजधानी एकमात्र कारण हुन सक्छ कि कुरुप। र यति धेरै लागि कारण र बीस-नवौं वरिपरि सौन्दर्य को अभाव। मुख्य कुरा - सेवा जीवन, दुर्घटना संचार। यो आज पनि तिनीहरूलाई बस्न असुरक्षित छ। एक नवीकरण कार्यक्रम केही वर्ष मा बासिन्दा को स्थानांतरण समावेश छ।
राजधानी बढ्छ, बस depressing को वृद्धि दर संग आपतकालीन आवास स्टक। कार्यक्रम को dilapidated घरहरू तोडफोड व्यर्थमा अहिले बाहिर काम र विधान स्तरमा छलफल गरिएको छ छैन। जीवित लागि एक आरामदायक वातावरण बनाउन - शीर्ष लक्ष्य छ, र आजको चुनौती बासिन्दा भन्दा सुरक्षा सम्बन्धित। यो समस्या राजधानी मरम्मत, पुनर्निर्माण, आधुनिकीकरण, पुनर्स्थापना मद्दत गर्न सक्छ भने - यस्तो समाधान मा निर्णय हुनेछ, तर यो स्थितिमा, छिटो, सस्ता र बासिन्दा लागि थप लाभदायक - मात्र विनाश गर्न।
छैन केवल पाँच-मंजिल्ला ख्रुश्चेव नैतिक र शारीरिक अप्रचलित, तिनीहरूले दुर्घटना को धेरै कगार मा हो। मेयर सर्गेई Sobyanin घरमा यस्तो जंक भनिन्छ व्यर्थमा छैन। विरोधीहरूले आपतकालीन नजिक राज्य यी घरहरू मा रहछन छैन विशेषज्ञहरु र बासिन्दा आफू र आफ्नो प्रतिनिधि कि दर्शाउन। उजुरी लाखौं को नगरपालिका अर्थव्यवस्था मा संचित। कसले आफ्नै घर को अवस्था राम्रो छैन भने मालिकको थाहा गर्न सक्नुहुन्छ? स्थानीय सरकारहरूले देखि डाटा - एकदम विश्वसनीय जानकारी छ।
मास्को सरकार पहिले नै चार एक प्रारम्भिक सूची र आधा हजार भवनहरु पहिलो स्थानमा विनाश गरिने प्रकाशित गरेको छ। यी भवनहरु सबै जीवित को आधुनिक अवस्था पूरा गर्छन्, तिनीहरू dilapidated छन्, र बासिन्दा को बहुमत स्थानांतरण पक्षमा मतदान। को नवीकरण कार्यक्रम कुनै पनि घर छोडेर गर्न सकिन्छ। मतदान पहिले नै लिइएको छ स्थान - यो पन्ध्रौँ जुन 2017 सम्म मई को पन्ध्रौँ संग सञ्चालन भएको थियो।
यसबाहेक, मेयर पनि तोडफोड अन्तर्गत पर्न कि घरहरू सूची, यो तिनीहरूले बासिन्दाहरू मा जिद्दी भने विस्तार गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरामा विश्वस्त। तथापि, व्यवस्था अझै राज्य Duma अपनाए गरिएको छैन, र यसैले प्रश्न जल अहिलेसम्म कुनै प्रान्त हुन सक्दैन गर्न वा कार्यालयमा जवाफ पाउन। राज्य Duma को ग्रहण गर्न साथै, कानून संघ परिषद र अध्यक्ष को हस्ताक्षर द्वारा अनुमोदित हुनुपर्छ।
यदि नवीकरण बित्दै
मूल सूचीमा केही भवन मरम्मत भयानक छैन भने, घर निकट भविष्यमा छैन विनाश हुनेछ, र भाग छैन यो कार्यक्रम बासिन्दाहरू मा मतदान गर्न। तर यो अझै छैन। मेयर Sobyanin यदि स्थानांतरण को सामान्य सभामा ख्रुश्चेव मत बासिन्दाहरू दुई-तिहाई यसलाई अन्तिम छैन, किनभने मूल सूची, सम्पन्न गरिनेछ राजधानी वसोवास को राय ध्यान सुन्न सकिन्छ कि, र भन्नुभयो।
पाँच-मंजिल्ला ख्रुश्चेव साथै विनाश हुनेछ र पुरानो घरहरू दुई चार तले-यदि तिनीहरूले नै जीर्णता छन्। पनि त्रैमासिक विकास मा नौ-फन्दामा बासिन्दा स्थानांतरण आवश्यक भने, नवीकरण कार्यक्रम मा प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। Rallies विरुद्ध र नवीकरण लागि दुवै, मास्को मा आयोजित। राय विभाजित थिए।
मूल कागजात तोडफोड अपार्टमेन्ट भवन, 1957 देखि 1968 साल छ, कि औद्योगिक आवास, पहिलो अवधिमा erected विषय हुनेछ भनेर भन्छन्। यो भवन प्यानल 1mg-300 श्रृंखला, 1605-AM समावेश, द्वितीय-35, द्वितीय-32, K-7। यो जानकारी राजधानी योजना नीति साइटमा स्थित छ। र नवीकरण कार्यक्रम समावेश गर्ने हुनेछ र आफ्नो विशेषताहरु जस्तै निराशाजनक छन् भने भवन, 1957 अघि निर्मित यो पनि भन्छन्।
आफ्नो अवस्था सन्तोषजनक छ भने सहज र मजबूत पाँच-मंजिल्ला घर, विनाश हुनेछ। सूची पहिले नै, निर्माण को aforesaid अवधि होइन बिल्कुल ख्रुश्चेव समान छैन भन्ने भवनहरु केही पनि समावेश छ। बस एक सय वर्ष भन्दा तिनीहरूलाई केही, र यो सीमा गर्न अन्य बन्द गर्नुहोस्। साथै, प्रारम्भिक सूची सम्पूर्ण क्षेत्रमा र बासिन्दा किनभने स्थानांतरण को protesting थिए जहाँ केही घरमा, बहिष्कृत थिए।
जहाँ विनाश ख्रुश्चेव वसोवास लागि नयाँ घर निर्माण गरिनेछ छ, तिनीहरूले जस्तै कुनै एक थाह हुनेछ के किनभने परियोजनाहरुमा काम मास्को को सबै भन्दा राम्रो वास् सम्म। तर उदाहरणीय परियोजनाहरू पहिले नै अवस्थित र सरकार वेबसाइटमा पाउन सकिन्छ। बासिन्दा राम्रो सकेर कोठा को संरक्षण संख्या संग ब्रान्ड नयाँ आरामदायी घर प्रदान गरिनेछ।
क्षेत्र द्वारा, सबै भन्दा अवस्थामा तिनीहरूले ठूलो हल, भान्सा र गलियारों को खर्च मा पुरानो अपार्टमेन्ट भन्दा बढी हुनेछ। साथै, ती Muscovites आफ्नो जीवित अवस्था सुधार गर्न चाहने लागि, यो सम्भव एक थप शुल्क मार्फत गर्न हुनेछ। ठूलो परिवार, साना ख्रुश्चेव मा धेरै पुस्ताका गरेर cooped, resettled गरिनेछ।
साँढेको किन रंग रातो रुचि छैन? आक्रमण को कारण
आफ्नो जीवन सुरक्षित गर्न प्रकृति रक्षा,
मास्को र मस्को क्षेत्र सबैभन्दा सुन्दर रजिस्ट्री कार्यालय: सूची, वर्णन र समीक्षा समीक्षा
Kronstadt - सेन्ट पीटर्सबर्ग - दूरी। सेन्ट पीटर्सबर्ग मा Kronstadt प्राप्त गर्न कसरी
बाल लागि अरंडी तेल - समीक्षा, मूल, लाभ
काउली र अन्य व्यञ्जनहरु को Casserole
अपराधी कोड को St.158 भाग 1: टिप्पणीहरू। अपराधी कोड "चोरी" को लेख 158
Scoliosis - यो के हो? रोकथाम र scoliosis को उपचार
Juicer गाजर: सबै भन्दा राम्रो विकल्प चयन कसरी
कार "डज राम 3500" (डज राम): विनिर्देशों, समीक्षा र फोटो